MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardCall mm Archives - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Category: Call mm
Conference Call FAQs MM
VAS » Conference Call
Conference Call ဝန်ဆောင်မှု
၁။ Conference Call ဆိုတာဘာလဲ။
Conference Call ဆိုတာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ကြိမ်အတွင်း (initiator အပါအဝင်) ဖုန်းနံပါတ် ခြောက်ခုအထိ တပြိုင်တည်းဖုန်ခေါ်ပြီး ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်အောင် အထောက်အပံ့ပေးထားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။အမ်ပီတီရဲ့ Conference Call ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု တစ်ကြိမ်အတွင်းမှာ ဖုန်းနံပါတ် အများကြီးကိုခေါ်ပြီး ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပါပြီ။
၃။ ရယူထားတဲ့ Conference Call ၀န်ဆောင်မှုကို ပြန်ပြီးပယ်ဖျက်လို့ ရပါသလား။
၁၃၃၁ ကို CC OFF လို့ မက်ဆေ့ချ်ပို့ပြီး ရယူထားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို ပြန်ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် USSD Menu ကနေ ၀န်ဆောင်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း ပယ်ဖျက်နို်င်ပါတယ်။
၅။ Conference Call ၀န်ဆောင်မှုမှာ ဖုန်းနံပါတ် ဘယ်နှစ်ခုအထိနဲ့ တပြိုင်တည်း ဖုန်းဆက် ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပါသလဲ။
ဖုန်းနံပါတ် ၆ခုအထိနဲ့ တပြိုင်တည်း ဖုန်းပြောနိုင်ပါတယ်။
၂။ Conference Call ၀န်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ။
၁၃၃၁ ကို CC လို့ ရို်က်ပို့ပြီး Conference Call ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူနို်င်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် USSD Menu ကနေလည်း ၀န်ဆောင်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း ရယူနိုင်ပါတယ်။
၄။ Conference Call ၀န်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရပါသလဲ။
ပထမဦးဆုံး ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို အရင်ခေါ်ရမှာပါ။ ပြီးရင် Add Call ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး တခြားဖုန်းနံပါတ်တွေ ( ၅ခုအထိ) ထပ်ခေါ်ရမှာပါ။ ပြီးရင် Merge Call ကို နှိပ်ပြီး ခေါ်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်အားလုံးနဲ့ တပြိုင်တည်း ဖုန်းပြောနိုင်ပါတယ်။
Conference Call ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူတဲ့အတွက် ၀န်ဆောင်ခပေးစရာမလိုပါဘူး။ Conference Call ၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုရာမှာ သုံးစွဲသူရယူထားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ပေါ်မူတည်ပြီး အထွက်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုစီအပေါ်မှာ ၀န်ဆောင်ခကောက်ခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဥပမာ- ဆွေသဟာအစီအစဉ်ကို ယူထားတယ်ဆိုရင် ဖုန်းခေါ်ဆိုခ တစ်မိနစ် ၂၃ကျပ်ကျသင့် မှာပါ။ ရှယ်ပြောအစီအစဉ်ယူထားတယ်ဆိုရင် အမ်ပီတီဖုန်းနံပါတ်အချင်းချင်းခေါ်ဆိုမှုအတွက် တစ်မိနစ် ၁၅ကျပ် နဲ့ တခြားအော်ပရေတာဖုန်းနံပါတ်ကို ခေါ်ဆိုမှုအတွက် တစ်မိနစ် ၂၅ကျပ် ကျသင့်မှာပါ။ Base Tariff အစီအစဉ် ရယူထားသူတွေကတော့ (လူအများစု ဖုန်းပြောတတ်တဲ့ အချိန်ပိုင်းတွေမှာ ) ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်မိနစ်ကို ကျပ်၅၀ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး (ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု သိ်ပ်မများ တဲ့ အချိန်ပိုင်းတွေမှာ) တစ်မိနစ် ၂၅ကျပ်ကျသင့်မှာပါ။
1. Conference Call ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရပါသလဲ။
ပထမဦးဆုံး ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို အရင်ခေါ်ရမှာပါ။ ပြီးရင် Add Call ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး တခြားဖုန်းနံပါတ်တွေ (၅ခု အထိ) ထပ်ခေါ်ရမှာပါ။ ပြီးရင် Merge Call ကိုနှိပ်ပြီး ခေါ်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်အားလုံးနဲ့ တပြိုင်တည်း ဖုန်းပြောနိုင်ပါတယ်။
– 1331 သို့ “CC” ဟု SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ဒါမှမဟုတ် USSD Menu ကနေလည်း ၀န်ဆောင်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း ရယူနိုင်ပါတယ်။
– 1331 သို့ “CC OFF” ဟု SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ဒါမှမဟုတ် USSD Menu ကနေ ၀န်ဆောင်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 11, 2017 ဩဂုတ် 26, 2020 Categories Call mm, VAS mm
MPT Ring Tune MM Faqs
VAS » MPT Ring Tune
Caller Ring Back Tone ဝန်ဆောင်မှု
၁။ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှု ဆိုတာ ဘာလဲ။
Ring Tune ဝန်ဆောင်မှုဆိုသည်မှာ လူကြီးမင်း၏ ပုံမှန် ဖုန်းမြည်သံအစား လူကြီးမင်း ရွေးချယ်လိုက်သော သီချင်းကို တေးသွား အဖြစ်သို့ အစားထိုးလိုက်သော ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။လူကြီးမင်းထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုသောအခါ လူကြီးမင်းဖုန်းမှ ရွေးချယ်ထားသော တေးသီချင်းများကို ဖုန်း Ring Tuneအဖြစ် ကြားရပါမည် ။ လူကြီးမင်း ကြိုက်နှစ်သက်သော တေးသွားများအား လတ်တလော ရေပန်းအစားဆုံး တေးသီချင်းများစွာ ထဲမှ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
၂။ Ring Tune service ကို ဘယ်လို ရယူနိုင်ပါလဲ?
အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီး Ring Tune service ကို ရယူနိုင်ပါသည်။
• MPT သို့ 7979 ဟု ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်၍ Ring Tune service ကို ရယူနိုင်ပါသည်။
• SMS ပေးပို့၍ရယူရန် – လစဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန်အတွက် 7979 သို့ REG M ၊ အပတ်စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန်အတွက် 7979 သို့ REG W ၊ နေ့စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန်အတွက် 7979 သို့ REG D ဟု SMS ပေးပို့၍ ရယူနိုင်ပါသည်။
• လူကြီးမင်း ဝယ်ယူလိုသော သီချင်းကုဒ် နံပါတ်အား buy ဟု SMS ပေးပို့၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ Example: buy 0001110010
• *7979# သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ကြိုက်နှစ်သက်သော တေးသီချင်း များအားလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
၃။ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှု အတွက် မည်သို့ ကျသင့်မည့် နည်း။
• လစဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု အတွက် တစ်လ (ရက် ၃၀)စာအတွက် (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း) ၁၀၅၀ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
• အပတ်စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု အတွက် တစ်ပတ် (၇ ရက်)စာအတွက် (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း) ၃၀၀ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
• နေ့စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု အတွက် တစ်ရက်စာအတွက် (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း) ၄၇ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
• သီချင်း တစ်ပုဒ်လျှင် ရက်(၃၀)စာ အတွက် (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း) ၃၁၅ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
၄။ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှုအား သတ်တမ်း တိုးရန် မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။
ဤဝန်ဆောင်မှုသည် အလိုအလျှောက် သက်တမ်း တိုးပေးသော ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ ဝန်ဆောင်မှု ရက် သက်တမ်းအား အခြေခံ ၍ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှု သက်တမ်းနှင့် သီချင်း ဝန်ဆောင်မှု သက်တမ်း ပြည့်လျှင် လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းလက်ကျန်ငွေမှ ဝန်ဆောင်မှု အတွက် ကျသင့်ငွေအား နှုတ်ယူပါမည်။
၅။ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှုအား မည်သို့ ပယ်ဖျက်ရမည်နည်း။
• 7979 သို့ အခမဲ့ ခေါ်ဆို၍ အကူအညီပေးရန်သို့ သွားရောက်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုအား ပယ်ဖျက်ရန်ကို နှိပ်ပါ။ (သို့မဟုတ်)
• 7979 သို့ UNR ဟု SMS ပေးပို့ပါ။ (သို့မဟုတ်)
• MPT4U APP ပေါ်မှ CRBT ပယ်ဖျက်ရန် ကို ရွေးချယ်ပါ။ (သို့မဟုတ်)
• *7979# သို့ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ဝန်ဆောင်မှုဖျက်သိမ်းမည်အား ရွေးချယ်ပြီး ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်)
• 106 customer care IVR သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ဝန်ဆောင်မှုအား ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
၆။ လူတစ်ယောက်ချင်းစီ အတွက် တေးသွား သတ်မှတ်လို့ ရနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ အောက်ပါ ဖော်ပြထားသော အချက်များကို လုပ်ဆောင်၍ လူတစ်ယောက်ချင်းစီ အတွက် သီးသန့် Ring Tune သတ်မှတ်ထားလို့ ရနိုင်ပါသည်။
• 7979 သို့ (အခမဲ့) ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီ: လမ်းညွန်ချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
၇။ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်သော တေးသီချင်း အား သူငယ်ချင်းထံမှ ကူးယူ လို့ ရနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များအား လုပ်ဆောင်၍ လူကြီးမင်း သူငယ်ချင်း၏ MPT ring Tune ဝန်ဆောင်မှုမှ သီချင်းကို လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းတေးသီချင်း အဖြစ် ကူးယူနိုင်ပါသည်။
• 7979 သို့ အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ လမ်းညွှန်ချက်များ အတိုင်း လုပ်ဆောင်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်)
• *7979# ဟု ရိုက်နှိပ်ပြီး လည်း ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
၈။ လူတစ်ယောက်လျှင် သီချင်း အပုဒ်ရေ မည်မျှ ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါသလဲ။
လူတစ်ယောက်လျှင် အများဆုံး သီချင်း ဆယ်ပုဒ်အထိ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ၎င်း တေးသီချင်း များကို ခေါ်ဆိုသူဘက်မှ အလှည့်ကျနားဆင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ ဝယ်ယူထားသော သီချင်းကို မည်သို့ ပယ်ဖျက်နိုင်ပါ သလဲ။
• 7979 ကို ဖုန်းခေါ်ဆို၍ အကူအညီပေးရန် သို့ သွားရောက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ကို စစ်ဆေးရန် သို့ ဝင်ရောက်၍ သီချင်း ကို ပယ်ဖျက်ရန် ကို ရွေးပါ။ (သို့မဟုတ်)
• Del ဟု ရိုက်နှိပ်၍ 7979 သို့ SMS ပေးပို့ပါ။ Example: Del 0001110010 (သို့မဟုတ်)
• 106 customer care IVR သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို ၍ သီချင်းအား ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
၁၀။ အကယ်၍ ဖုန်းပြောနေစဥ်အတွင်း တခြားတစ်ယောက်မှ မိမိထံ ဖုန်းခေါ်နေသောအခါ မိမိRing Tune ဝန်ဆောင်မှု မည်သို့ လုပ်ဆောင်မည်နည်း။
ဤအခြေအနေတွင် လူကြီးမင်းထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုသူမှာ ပုံမှန် ဖုန်းမြည်သံကိုသာ ကြားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၁။ သူငယ်ချင်း နဲ့ မိသားစုဝင် များထံသို့ Ring Tune သီချင်း ဝန်ဆောင်မှု လက်ဆောင် ဘယ်လိုပေးမလဲ။
7979 သို့ (အခမဲ့) ဖုန်းခေါ်ဆို၍ လမ်းညွှန်ချက်များ အတိုင်း လုပ်ဆောင်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။
၁၂။ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှု လက်ဆောင် ပေးရန်အတွက် မည်သို့ ကျသင့်ပါမည်နည်း။
အကယ်၍ လူကြီးမင်းလက်ဆောင် ပေးလိုသောသူမှာ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူထားပြီးသူ ဖြစ်ပါက –
• သီချင်း အတွက် ပထမ တစ်လစာ ဝန်ဆောင်မှု ၃၁၅ ကျပ်အား လူကြီးမင်းထံမှ ကျသင့်ပြီး နောက်လများမှ စ၍ သီချင်းလက်ဆောင် လက်ခံရရှိသောသူထံမှ ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သီချင်း လက်ဆောင်ပေးလိုသောသူမှာ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှု အား ရယူထားခြင်း မရှိပါက –
• Ring Tune ဝန်ဆောင်မှု ပထမ ရက်(၃၀)စာ အတွက် ၁၀၅၀ကျပ် နှင့် သီချင်းအတွက် ရက် ၃၀ စာ ဝန်ဆောင်ခ ၃၁၅ ကျပ် အား လူကြီးမင်းထံမှ ကျသင့်ပါမည်။ နောက်လများမှ စ၍ Ring Tune ဝန်ဆောင်ခ ၁၀၅၀ ကျပ်နှင့် သီချင်း အတွက် ဝန်ဆောင်ခ ၃၁၅ ကျပ်အား လက်ဆောင်လက်ခံရရှိသူထံမှ ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၃။ Name Tune ဝန်ဆောင်မှု ဆိုတာ ဘာလဲ။
Name Tune ဝန်ဆောင်မှု ဆိုသည်မှာ လူကြီးမင်းထံ သို့ ဖုန်းခေါ်သူများကို လူကြီးမင်း၏နာမည်ဖြင့် နှုတ်ဆက်ခြင်း ပုံစံဖြင့် MPT မှ ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
၁၄။ Name Tune ဝန်ဆောင်မှာ အား မည်သို့ ရယူနိုင်ပါ မည်နည်း။
အောက်တွင် ဖော်ပြ ထားသော နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခု ကို အသုံးပြု၍ MPT Name Tune ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
• SMS ပေးပို့ရန် – လစဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန် REG M ဟု SMS ပေးပို့ခြင်း၊ အပတ်စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန် REG W ဟု SMS ပေးပို့ခြင်း၊ နေ့စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန် REG D ဟု 7979 သို့ SMS ပေးပို့၍ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်)
• ပိုမိုသိရှိရန် 106 ကို ဖုန်းခေါ်ဆို၍ Name Tune ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူနိုင်ပါသည်။
၁၅။ Name Tune ဝန်ဆောင်မှု အတွက် မည်သို့ကျသင့်ပါမည်နည်း။
• လစဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု အတွက် တစ်လ ရက်၃၀စာ အတွက် (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း)၁၀၅၀ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
• Name Tune တစ်ပုဒ် အတွက် ရက်၃၀ စာ (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း )၃၁၅ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
၁၆။ ဝန်ဆောင်မှု သက်တမ်းတိုးရန် ဖုန်းဘေလ်လုံလောက်မှု မရှိပါက မည်သို့ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။
• နောက်(၅)ရက်အတွင်း ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကျသင့်ငွေကို ကောက်ခံမှာြဖစ်ပြီး ဝန်ဆောင်ခအတွက် လက်ကျန်ငွေလုံလောက်မှု ရှိပါက ဝန်ဆောင်မှုကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
• နောက်(၅)ရက်အတွင်း ဖုန်းဘေလ် လုံလောက်မှုမရှိပါက လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင် ဝန်ဆောင်မှုအား ရပ်ဆိုင်းရန်အတွက် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
၁၇။ ဝန်ဆောင်မှု အား သက်တမ်းတိုးရန် ငွေ လုံလောက်ခြင်းမရှိပါက မည်သို့ ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။
အကယ်၍ လူကြီးမင်းထံ၌ လက်ကျန်ငွေ မလုံလောက်ပါက ဝန်ဆောင်မှု အတွက် သက်တမ်းတိုးပေးရန် စောင့်ဆိုင်းသော ကာလသို့ ရောက်ရှိပါမည်။အကယ်၍ သက်တမ်းတိုးရန် စောင့်ဆိုင်းကာလတွင် သက်တမ်းတိုးခြင်းအား မအောင်မြင်ပါက လူကြီးမင်း၏ ဝန်ဆောင်မှုအား အလိုအလျောက် ပယ်ဖျက်မည် ဖြစ်ပါမည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 30, 2016 ဇန်နဝါရီ 29, 2021 Categories Call mm, VAS mm
Call Waiting Service MM
VAS » Call Waiting ဝန်ဆောင်မှု
Call Waiting ဝန်ဆောင်မှု
1 . Call Waiting Service ဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ?
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဖုန်းပြောနေစဉ် အချိန်အတွင်းတွင် အခြား အရေးကြီးဖုန်းများ ထပ်မံဝင်ရောက်လာပါက မိမိလက်ရှိပြောနေသည့် ဖုန်းကို ဆိုင်းငံ့နိုင်ပြီး ခေါ်ဆိုမှုအသစ်များကို ထပ်မံ လက်ခံနိုင်မည့် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
– 1331 သို့ “CW” ဟု SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
– 1331 သို့ “CW OFF” ဟု SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
2 . Call Waiting Service ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?
ဖုန်းပြောနေစဉ် နောက်ထပ် ခေါ်ဆိုသူရှိပါက အသိပေးအချက်ပြသံကို ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင် လက်ရှိ ဖုန်းပြောနေသူနှင့် ခေတ္တဆိုင်းငံ့ပြီး နောက်ခေါ်သူနှင့် ပြောင်းပြောခြင်း၊ ဖုန်းခေါ်မှုနှစ်ခုထဲမှ တစ်ခုကို ရပ်နားနိုင်ပါတယ်။ ပထမပြောနေသူ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ကိုင်ထားသ၍ ပြန်လည် ပြောင်းလဲ ပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ထဲတွင် ဖုန်းခေါ်သူ တစ်ယောက်သာ စောင့်စရာလိုပါမယ်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 30, 2016 ဩဂုတ် 26, 2020 Categories Call mm, VAS mm
Call Me Back MM
VAS » Call Me Back
1. Call Me Back ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ။
Call Me Back ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာ သုံးစွဲသူများ၏ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစု၊ ချစ်ခင်ရသူတွေထံမှ မိမိကို ပြန်လည်ခေါ်ဆိုစေချင်သည့် မည်သည့်ပြည်တွင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုမဆို (MyTel ဖုန်းနံပါတ်မှလွဲ၍) *222# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် သိရှိစေနိုင်ရန် MPT မှ စီစဉ်ပေးထားသည့် အထူးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
2. Call Me Back ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်သူတွေရယူနိုင်မှာလဲ။
MPT prepaid and postpaid GSM/WCDMA သုံးစွဲသူအားလုံးမှ မည်သည့်ပြည်တွင်းဖုန်းမဆို (MyTel ဖုန်းနံပါတ်မှလွဲ၍) စာရင်းသွင်းခပေးစရာမလို၊ ခေါ်ဆိုခပေးစရာမလိုဘဲ ခေါ်ဆိုအသုံးပြုနိုင်သော အထူးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
3. အထွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမရနိုင်သည့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် “Call Me Back” ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အထွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမရနိုင်သည့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် *222# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆို၍ “Call Me Back” ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အခြား MPT prepaid and postpaid GSM/WCDMAမှ ပေးပို့သော Call Me Back SMS ကို အ၀င်အဖြစ် လက်ခံရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
4. အဝင်/အထွက်ဖုန်းလက်ခံမရရှိနိုင်သည့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် “Call Me Back” ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ CDMA နှင့် အဝင်/အထွက်ဖုန်းလက်ခံမရရှိနိုင်သည့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် “Call Me Back” ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
5. Call Me Back ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရမှာလဲ။
ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန် *222*ခေါ်ဆိုစေလိုသည့်ဖုန်းနံပါတ်# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် မည်သည့်ပြည်တွင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုမဆို (MyTel ဖုန်းနံပါတ်မှလွဲ၍) အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပြီးသည့်နောက် အောက်ပါစာသားဖြင့် စာတိုတစ်စောင်ကို ပေးပို့သူမှ လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ “Thank you for using call me back! your request has been processed”။
6. လက်ခံရရှိသူထံသို့ ဤ “Call Me Back” တောင်းဆိုသည့် SMS ဘယ်လိုပေါ်မှာလဲ။
MPT ၏ “Call Me Back” ဝန်ဆောင်မှုကို အကျုံးဝင်သည့် လက်ခံရရှိသူအနေဖြင့် အောက်ပါစာသားဖြင့် စာတိုတစ်စောင်ကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ “မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ 09XXXXXXXXX ကို ယခုပြန်လည်ခေါ်ဆိုပေးပါ။”
7. ဤအခမဲ့ “Call Me Back” ဝန်ဆောင်မှုအား နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ခရီးသွားနေသောအချိန်တွင် request ပေးပို့ခြင်း/လက်ခံခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
ဤအခမဲ့ “Call Me Back” ဝန်ဆောင်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ရှိသော MPT prepaid and postpaid GSM/WCDMA သုံးစွဲသူများမှ မည်သည့်ပြည်တွင်းဖုန်းမဆို (MyTel ဖုန်းနံပါတ်မှလွဲ၍) အခမဲ့ ခေါ်ဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြင်ပသို့ရောက်ရှိနေသော အချိန်တွင် request ပေးပို့ခြင်း/လက်ခံခြင်း ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
8. ဤ “Call Me Back” ဝန်ဆောင်မှုကို မြန်မာဘာသာဖြင့် SMS ရရှိမှာပါလား။
MPT သုံးစွဲသူ(လက်ခံရရှိသူ)၏ ဘာသာစကား setting ပေါ်မူတည်၍ ဤဝန်ဆောင်မှုအတွက် စာတိုကို မြန်မာ(သို့) အင်္ဂလိပ် ဘာသာ(၂)မျိုးလုံးဖြင့် လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ အခြားအော်ပရေတာသုံးစွဲသူများသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ လက်ခံရရှိပါမည်။
9. ဤအခမဲ့ “Call Me Back” ဝန်ဆောင်မှုအား တခြားပြည်တွင်းဖုန်းသုံးစွဲသူများအား ခေါ်ဆို၍ရနိုင်ပါသလား။
MPT prepaid and postpaid GSM/WCDMA သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် “Call Me Back” ဝန်ဆောင်မှုကို မည်သည့်ပြည်တွင်းဖုန်းကိုမဆို (MyTel ဖုန်းနံပါတ်မှလွဲ၍) အခမဲ့ခေါ်ဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
10. ဤအခမဲ့ “Call Me Back” ဝန်ဆောင်မှုကို တစ်နေ့လျှင် ဘယ်နှကြိမ် အသုံးပြုနိုင်မှာပါလဲ?
ဤအခမဲ့ “Call Me Back” ဝန်ဆောင်မှုကို တစ်နေ့လျှင် (၅)ကြိမ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
11. တစ်နေ့တည်းတွင် “Call Me Back” ဝန်ဆောင်မှုကို ၅ ကြိမ်အသုံးပြုပြီးပါက ဘာဖြစ်မှာလဲ။
တစ်နေ့တည်းတွင် “Call Me Back” ဝန်ဆောင်မှုကို ၅ ကြိမ်အသုံးပြုပြီးပါက အောက်ပါစာသားဖြင့် စာတိုတစ်စောင်ကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ “Dear MPT Customer, you have exceeded the limit to use Call me back! for today”
12. “Call Me Back” ဝန်ဆောင်မှုကို ဘာကြောင့်သုံးသင့်တာလဲ။
သုံးစွဲသူများကို သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစု၊ ချစ်ခင်ရသူတွေနှင့် ဖုန်းလက်ကျန်ငွေကုန်သွားချိန်မျိုးမှာ အဆက်အသွယ်မပြတ်စေဖို့ MPT မှ စီစဉ်ပေးထားသည့် အထူးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
1 . Call Me Back service ကိုဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ?
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိမိကို ပြန်လည်ခေါ်ဆိုစေချင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို *222# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် သိရှိစေနိုင်မည့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ (မည်သည့်ပြည်တွင်းဖုန်းကိုမဆို)
“ CALL ME BACK” ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုရန် *222* မိမိအား ပြန်လည်ခေါ်ဆို စေလိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်#[send]
ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီးသော် မိမိပြန်လည်ခေါ်စေလိုသည့် နံပါတ်တွင် အောက်ပါ Message ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ “မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ 09XXXXXXXXX ကို ယခုပြန်လည်ခေါ်ဆိုပေးပါ။”
Missed Call Alert Service MM
VAS » Missed Call Alert Services
Missed Call Alert ဝန်ဆောင်မှု
အသုံးပြုသူအနေဖြင့် ခေါ်ဆိုသူထံမှအောက်ပါ။ MCA message အားလက်ခံရရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
“You haveamissed call from 09XXXXXXXX at xx:xxdd-mm-yyyy.”
MCA ၀န်ဆောင်မှုအတွက် ဘယ်သူတွေက အကျုံးဝင်မှာလဲ။
MPT GSM/WCDMA ဆင်းကတ်အသစ်စတင် အသုံးပြုသူတွေ ဟာ MCA ၀န်ဆောင်မှုကို အလိုလျှောက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပါသော်လည်း Voice Mail ၀န်ဆောင်မှု နှင့်Call Forwarding ၀န်ဆောင်မှုလည်းအသုံးပြုများမှာ MCA ၀န်ဆောင်မှုကို အလိုအလျောက်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
MCA SMS အားမြန်မာဘာသာဖြင့်လက်ခံရရှိနိုင်ပါသလား။
လတ်တလောမှာတော့ ဤဝန်ဆောင်မှုအားEnglish ဘာသာဖြင့်သာလျှင် SMS လက်ခံနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်းMPT မှ မြန်မာဘာသာဖြင့်ပေးပို့/လက်ခံရရှိရန် ဆောင်ရွက်နေလျှက်ရှိရာ မကြာသေးတော့ခင် အချိန်များတွင် ပေးပို့/လက်ခံရရှိတော့မည့်ဖြစ်ပါသည်။
Missed call များကို စစ်ဆေးရန် ဖုန်းခေါ်ဆိုဖို့ လိုပါသလား။
Missed call များလက်ခံရရှိထားပါက system မှ နေ၍ အလိုအလျှောက် SMS ပေးပို့မှာဖြစ်ပါသည်။
Voice Mail ဝန်ဆောင်မှု နှင့် Missed Call Alert ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ထိုဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း အသုံးပြု၍ မရပါ။
MPT သုံးစွဲသူများအတွက်MCA ၀န်ဆောင်မှုသည် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်သောကြောင့် မည်သည့်ဝန်ဆောင်ခမှပေးရန်မလိုအပ်ပါ။
Missed Call Alert ဝန်ဆောင်မှုကို မည်သို့ ရယူရမည်နည်း။
Missed Call Alert ဝန်ဆောင်မှုစတင်အသုံးပြုရန် “MCA” ဟုရိုက်ကာ 1331 သို့ SMS ပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုမှာ အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ လစဉ်ကြေးပေးရန်မလိုပါ။
Missed Call Alert ဝန်ဆောင်မှုအား ဘယ်လိုအသုံးပြုရပါသလဲ။
သုံးစွဲသူမှာ လတ်တလော ဆက်သွယ်၍ မရနိုင်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းပိတ်ထားသည့် အချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ထား
သည့် ဖုန်းနံပါတ်များကို စာတိုစနစ်ဖြင့် ပြန်လည် အသိပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ လက်ခံရရှိသည့်စာတိုအတွက် ဝန်ဆောင်ခပေးရန်မလိုပါ။
Missed Call Alert ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးမပြုလိုတော့ပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
“MCA OFF” ဟုရိုက်ကာ 1331 သို့ မက်ဆေ့ ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 30, 2016 အောက်တိုဘာ 21, 2016 Categories Call mm, VAS mm
Call Forwarding Service MM
VAS » Call Forward ဝန်ဆောင်မှု
Call Forward ဝန်ဆောင်မှု
Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို မည်သို့ ရယူရမည်နည်း။
Call Forward ဝန်ဆောင်မှုစတင်အသုံးပြုရန် “CF” ဟုရိုက်ကာ 1331 သို့ SMS ပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုအားလျှောက်ထားရယူရန်မှာ အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ လစဉ်ကြေးပေးရန်မလိုပါ။
လက်ခံရရှိသော အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများအား အခြားနံပါတ်တစ်ခုသို့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသလား။
လက်ခံရရှိသော အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများအား MPT ဖုန်းနံပါတ်များသို့သာ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။
Call Forward ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးမပြုလိုတော့ပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
“CF OFF” ဟုရိုက်ကာ 1331 သို့ မက်ဆေ့ ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါသည်။
Call Forward ဝန်ဆောင်မှုအား ဘယ်လိုအသုံးပြုရပါသလဲ။
Call Forward ဝန်ဆောင်မှုမှာ လက်ခံရရှိသော အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများအား အခြားနံပါတ်တစ်ခုသို့ လွှဲပြောင်း
ပေးနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ လက်ခံရရှိသောအဝင်ခေါ်ဆိုုမှုကို လွှဲပြောင်းပေးလိုပါက အောက်ပါ
*21*လွှဲပြောင်းပေးလိုသောဖုန်းနံပါတ်# ကိုခေါ်ဆိုရပါမည် (ဥပမာ – *21*09xxxxxxx#)
မိမိ၏ဖုန်းရှိ Settings သို့ သွားရောက်ပြီး always forward, forward when busy, forward when unanswered, forward when unreachable အစရှိသည်တို့ကို ရွေးချယ်ပေးပြီး လွှဲပြောင်းပေးလိုသော
ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ထားရပါမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Settings များကို Calls တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
လွှဲပြောင်းပေးသောအဝင်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် မည်မ ျှပေးဆောင်ရပါသလဲ။
Call Forwarding ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းမှာအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
Call Forwarding ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရာတွင် အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို လျှောက်ထားအသုံးပြုသူမှ ခေါ်ဆိုခနှုန်းထားအတိုင်း ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
A (ခေါ်ဆိုသူ) -> B (လွှဲပြောင်းသူ) ->; C (လက်ခံရရှိသူ)
ယခု ဝန်ဆောင်မှုအားအသုံးပြုရာတွင် လွှဲပြောင်းသူမှာ ဆွေသဟာအသုံးပြုပါက တစ်မိနစ်လျှင် ၂၃ ကျပ်နှုန်းဖြင့်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီ၊ ရိုးရိုးနှုန်းထားအသုံးပြုပါက တစ်မိနစ်လ ျှင် ၅၀ ကျပ် (အသုံးပြုသူနည်းသည့်အချိန် ည ၁၁ နာရီိနောက်ပိုင်းအတွက် ၂၅ ကျပ်) တို့အသီးသီးကျသင့်ပါမည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 30, 2016 မေ 16, 2019 Categories Call mm, VAS mm
Voice Mail Service MM
VAS » Voice Mail Service
Voice Mail ဝန်ဆောင်မှု
Voice Mail ဝန်ဆောင်မှုကို မည်သို့ ရယူရမည်နည်း။
Voice Mail ဝန်ဆောင်မှုစတင်အသုံးပြုရန် 1331 သို့ VMS ဟုရိုက်ကာ SMS ပေးပို့ပါ။
Voice mail အား စတင်အသုံးပြုစဉ်တွင် 1550 သို့ ခေါ်ဆိုကာ သင်၏ နှုတ်ဆက်သံနှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ် Password (၄ လုံးမှ ၆လုံး) ကို သွင်းထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုမှာ အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ လစဉ်ကြေးပေးရန်မလိုပါ။
( ၁) Voice Mail ပို့သူများ ကြားရမည့် သင့်ရဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကို အသံသွင်းပါ
(၂) Voice Mail ပို့အပြီးတွင် ကြားရမည့် သင့်ရဲ့ နှုတ်ဆက်စကားကို အသံသွင်းပါ
(၃) လျို့ဝှက်နံပါတ် ထည့်သွင်းပါ
လက်ခံရရှိထားသော အသံမက်ဆေ့ အား အခြားနံပါတ်တစ်ခုမှနေ၍ ခေါ်ဆို စစ်ဆေးနိုင်ပါသလား?
လက်ခံရရှိထားသော အသံမက်ဆေ့အား အခြားဖုန်းတစ်ခုမှနေ၍ 1550 သို့ ခေါ်ဆိုကာ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ 1550 သို့ ခေါ်ဆိုပြီး ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Special Greeting Message ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
Voice Mail ဝန်ဆောင်မှုတွင် Personal Greeting Message (ကိုယ်ပိုင် နှုတ်ခွန်းဆက်စကား) နှင့် Special Greeting Message (အထူးနှုတ်ခွန်းဆက်စကား) ဟူ၍ (၂) မျိုးရှိပါသည်။ Special Greeting Message (အထူးနှုတ်ခွန်းဆက်စကား) ကို အသံသွင်းထားပါက Personal Greeting Message (ကိုယ်ပိုင် နှုတ်ခွန်းဆက်စကား) ကို ကြားရမည်မဟုတ်ဘဲ အထူးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုသာ ကြားရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Voice Mail ဝန်ဆောင်မှုအား ဘယ်လိုအသုံးပြုရပါသလဲ။
သုံးစွဲသူမှာ လတ်တလော ဆက်သွယ်၍ မရနိုင်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းပိတ်ထားလျှင်ဖြစ်စေ၊ ခေါ်ဆိုသူအနေဖြင့် အသံမက်ဆေ့ ချန်ထားနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
အသံမက်ဆေ့ရရှိပါက အချက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၁၅၅၀ သို့ခေါ်ဆိုကာ မက်ဆေ့ကို နားထောင်ရန်၊ ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် စီမံနိုင်ပါသည်။ အများဆုံး အသံမက်ဆေ့ အစောင် ၂၀ လက်ခံထားနိုင်ပါသည်။
အသံမက်ဆေ့နားထောင်ရန်နှင့် အသံမက်ဆေ့ထားခဲ့ရန်တို့အတွက် ပုံမှန်ခေါ်ဆိုမှုနှုန်းထားအတိုင်းကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
Voice Mail ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးမပြုလိုတော့ပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
“VMS OFF” ဟုရိုက်ကာ 1331 သို့ မက်ဆေ့ ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါသည်။
Voice Mail ဝန်ဆောင်မှု settings တွင် နှုတ်ခွန်းဆက်စကား၊ ဘာသာစကား၊ အသံအမှတ်အသား၊လျှို့ဝှက်နံပါတ်တို့ကို မည်သို့ ပြောင်းလဲရမည်နည်း။
Settings ထဲတွင် နှုတ်ခွန်းဆက်စကား၊ ဘာသာစကား၊ အသံအမှတ်အသား၊လျှို့ဝှက်နံပါတ် တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲပြင်ဆင် နိုင်ပါသည်။
(၁) ၁၅၅၀ ကို ဖုန်းခေါ်ပါ
(၂) ကိုယ်ပိုင်အသံမက်ဆေ့ချ်များ သိမ်းဆည်းရာစာတိုက်ကိုရောက်ရှိရန် ၁ ကို နှိပ်ပါ။
(၃) Settings ကို နှိပ်ပါ
(၄) နှုတ်ခွန်းဆက်စကား (Greeting) အတွက် ၁ ကို နှိပ်ပါ၊ လျို့ဝှက်နံပါတ် (Password) အတွက် ၂ ကို နှိပ်ပါ၊ ဘာသာစကား (Language) အတွက် ၃ ကို နှိပ်ပါ၊ အသံအမှတ်အသား (Voice Signature) အတွက် ၄ ကို နှိပ်ပါ။
အသံမက်ဆေ့ချ်များလက်ခံရရှိထားပါက မက်ဆေ့ချ်အားလုံးကို နားထောင်ပြီးမှ setting menu ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ခေါ်ဆိုသူမှ မိမိချန်ထားရှိခဲ့သော Voice Mail မက်ဆေ့ချ်ကို ကဏ္ဍများခွဲနိုင်ပါသလား။
ခေါ်ဆိုသူများမှ မိမိ ချန်ထားရှိခဲ့သော အသံမက်ဆေ့ချ်၏ အရေးကြီးမှုပေါ်မူတည်ပြီး သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါသည်။ အသံမက်ဆေ့ချ်သွင်းပြီးပါက * ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးလ ျှင် ပုံမှန်အသံမက်ဆေ့ချ်အတွက် နံပါတ် ၁ ၊ အရေးကြီးအသံမက်ဆေ့ချ်အတွက် နံပါတ် ၂၊ လျို့ဝှက်အသံမက်ဆေ့ချ်အတွက် ၃ ကို နှိပ်ပါ။ အသံမက်ဆေ့ချ်၏ ကဏ္ဍ ခွဲခြားမှုနှင့်ပတ်သတ်ပြီး SMS လက်ခံရရှိပါမည်။
1. Voice Mail Service ဆိုတာဘာလဲ?
မိမိခေါ်ဆိုသူ၏ ဖုန်းမှာ ယာယီခေါ်ဆိုမရ၍ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းပိတ်ထား၍ဖြစ်စေ မိမိ ပြောပြလိုသည်များကို အသံမက်ဆေ့ချ်အဖြစ် ချန်ထားခဲ့နိုင်သည့် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
– 1331 သို့ “VMS” ဟု SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
– 1331 သို့ “VMS OFF” ဟု SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။